खुशीको खबर ! १६ कम्पनीको ६ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ आउँदै Nepalpatra खुशीको खबर ! १६ कम्पनीको ६ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ आउँदै
खुशीको खबर ! १६ कम्पनीको ६ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ आउँदै
काठमाडौँ । सेयर बजारले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड बनाइरहेका बेला थप १६ कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेका छन् । सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि ती कम्पनीले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेका छन् ।
सामान्यतया बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ  । सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका १६ कम्पनीले ५ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ८८ लाख ५० हजार
कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने जनाएका छन् । तीमध्ये १३ वटा जलविद्युत् र ३ वटा अन्य समूहअन्तर्गतका कम्पनी छन् । जलविद्युत् कम्पनीमध्ये प्रायःले स्थानीय र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेको बोर्डले जनाएको छ  ।
सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका संस्था जोड्दा ५० हाराहारी पुग्ने देखिन्छ । सेयर निष्कासन गरिसके पनि सूचीकृत नभएका, निष्कासन तयारीमा रहेका र निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या हेर्दा चालु वर्षभित्रै सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी तीन दर्जनभन्दा बढी पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
#६ अर्ब रुपैयाँ
चितवनमा दुर्घटनामा १ जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते
उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यलाई कोरोना भाइरस पुष्टि